गैर जिम्मेवार मन्त्री : 'जनताका काममा भन्दा गुटबन्दीमा धेरै व्यस्त !' — Arthatantra.com
Arthatantra.com > समाचार > गैर जिम्मेवार मन्त्री : ‘जनताका काममा भन्दा गुटबन्दीमा धेरै व्यस्त !’
गैर जिम्मेवार मन्त्री : ‘जनताका काममा भन्दा गुटबन्दीमा धेरै व्यस्त !’
काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौ र बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडासंगै देशमा कोरोना भाईरस देशव्यापी तीव्र रुपमा फैलिएको छ । यस्तो महामारी समुदायस्तरमा फैलदा पनि प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालको भने अत्तोपत्तो छैन । कामगरेजस्तो गरेर मिडिया छाईरहने मन्त्री दुलाल अन्य बेलाको भन्दा गैरजिम्मेवार देखिएका छन् ।
प्रदेशले १३ वटै जिल्लामा आईसोलेशन, क्वारेन्टाइन सहित उच्चस्तरीय सेवा जनतालाई दिनुपर्ने हो । जनताले अहिले नै हो सरकारको उपस्थिति खोज्ने । तर, मन्त्री दुलाललाई खोज्नु पर्ने स्थिति बनेको छ । मन्त्री दुलालले अधिकांश समय काठमाडौंमा बिताउने गरेका छन् ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा उनको भुमिका जनताले खोज्न थालेका छन् । साच्चै भन्नुपर्दा यो सबै काम उनकै मन्त्रालय मार्फत हुनुपर्ने हो । तर, उनलाई अहिले यो जानकारी पनि छैन कि कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि के काम भएका छन् र आगामी दिनमा के काम गर्नुपर्छ ? प्रतिक्रिया लिदा उनको जवाफ हुनेगर्छ गरीरहेका छौँ, गर्छौं ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका खास मानिने मन्त्री दुलाल अहिले सरकारमा भएपनी सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा सकृय रहेका छन् । उनी दैनिकरुपमा फेसबुकमा उपस्थिति जनाउने गर्छन् जहाँ सकरलाई अर्ती दिईरहेका हुन्छन् । आफ्नो पार्टीलाई अर्ती दिईरहेका हुन्छन्, जबकी उनी आफै सरकार विरुद्ध गुटबन्दी गरीरहेका हुन्छन् ।
दैनिक जसो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको ईसारामा विभिन्न गतिविधि गर्नमा नै सक्रिय छन् । खुमलटार तथा आफ्नै निवासमा समेत उनको गतिविधि शंकास्पद देखिएको उनी निकटका नेताहरूले भन्न थालेका छन् ।
“ सुरुवातमा त काम गर्ने आशामा हेरिएको थियो तर हामी निरास छौं “( उनी निकटका एक कार्यकर्ताले भने । हामीले उहाँलाई यस्तो सोचेका थिएनौं, के सोछे मैले के भयो अहिले भनेको जस्तो भयो भन्ने पनि भेटिन थालिसकेका छन् ।
उनले ध्यान नदिँदा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको गौरीटार रंगशालामा संचालित केही दिन अघि संचालनमा समेत अप्ठ्यारो परेको स्वास्थकर्मीले बताएका छन् । उनले समन्वय नगरेकै कारण कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेशका अन्य जिल्लामा हुनुपर्ने ठोस काम हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्यका अत्याधुनिक सामग्री प्रदेशका अस्पतालमा पुगेपनि उचित प्रयोगमा ल्याउन उनले भुमिका खेलेका छैनन् । दैनिकरुपमा जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट समन्वयकारी भुमिका खेल्न आग्रह गर्दा पनि हुन्छ मै टारेको कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
यसअघि कामगर्ने मन्त्रीका रूपमा ट्याग लागेका मन्त्रीले यस्तो महामारीमा माखो पनि मार्न नसकेको आम जनमानसमा चर्चा चल्न थालिसकेको छ ।
देशको संघीय राजधानी पनि यहि प्रदेशमा परेकोले संघीय सरकारले पनि सामाजिक बिकाश मन्त्रीले समन्वय नगरेको आशय प्रकट गरीसकेको छ ।
खुलस्त रूपमा नभनेपनी अहिलेको अवस्थासा जनतासामु छर्लङ्ग भने भएको छ । मन्त्री ज्यु अब गुटबन्दी मात्र गर्ने कि सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्री पनि छन् भन्ने आभास दिलाउने यो कोरोनाको समयमा । अरुबेला भनेको जसोतसो काम चलाउ होला तर मन्त्री ज्यु यो समय भनेको चलाउ कमाउ बेला हैन बचाउको बेला हो !
कोरोना महामारी नेपालमा शुरु हुनु पुर्व प्रदेश मन्त्रालयको सक्रियतामा रु एक करोड लगानी गरी भरतपुरमा कोरोना विशेष अस्पताल समेत बनाइयो तर केहि समयपछि अस्पतालको सामाग्री चोरी हुने र लथालिङ्ग बनाउने काम भयो । सप्रमाण चोरीको भिडियो सार्वजनिक हुँदा समेत कार्वाही गरिएन । यस प्रकारको अपराध ढाकछोप गर्न मन्त्री दुलालको मौनता गज्जबको देखिन्छ । यसमा पनि कमजोरी पक्कै छ ।
२०७७ भदौ ५ गते १३:५९ मा प्रकाशित
राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गर्यो अत्यन्त जरुरी सूचना
यस कारण आवश्यक छ पर्यटन विश्वविद्यालय
१५ दिनका लागि अत्यावश्कबाहेकका सेवा बन्द
रुकुम घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरिय समिति जाजरकोटमा